Factory Tour - Jiulong milina Manufacturing Co., Ltd.
Naorina tamin'ny 1992, nandrakotra ny faritra 25000 metatra toradroa sy atrikasa faritra 18000 metatra toradroa, izany mety manana ny fifamoivoizana sy ny toerana ambony ihany 30 minitra fiara ho any Ningbo Lishe International Airport ary 25 minitra monja fiara ho any Port --- Ningbo ny malaza seranan-tsambo iraisam-pirenena amin'ny ranomasina ny tombony azo amin'ny tsy silting,-lalina ny rano sy ny ranomandry-taona rehetra manodidina maimaim-poana.
NJMM Efa nandroso ny fitaovana,-draharahan'ny teknolojia ary koa ny manan-karena sy ny fitantanana fanamboarana traikefa amin'ny gazety-welded vy makarakara faritra mihoatra ny 10 taona. NJMM no eo amin'ny mpanamboatra mpitarika vitsivitsy izay manana ny famokarana rehetra dingana tsy nitondra fisotroana ho nandrisika vy makarakara.
Ny haingana fampandrosoana ny maoderina siansa sy ny teknolojia, ny tsena ho an'ny vokatra sy ny tolotra Lasa mainka mitaky, mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny mialoha fivarotana fanompoana, ny orinasa manana henjana fifantenana zazavao mpiasa, ary manome isan-karazany ny asa fampiofanana sy fahafahana mianatra any ivelany sy ara-teknika mpiasa. Company ny "mahomby sy mahomby, mpanjifa voalohany" dia mikendry ny fanompoana matihanina manome torohevitra sy fanohanana ara-teknika mpanjifa.
Quality no aina, ny hevitry ny hatsaran'ny dia ny fanahy ny fiainana. Noho izany, ny orinasa dia fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra, ary hanorina toetra feno fahatsiarovan marika eo amin'ny toerana voalohany. Orinasa miaraka amin'ny kalitao matihanina fitaovana fitiliana sy naka fanahy manokana, ny tanjona dia ny miantoka ny hatsaran'ny sy hanatsarana ny fifaninanana amin'ny orinasa.